Walaloo fi Afoola - Xalayaa
Home / Archive by category "Walaloo fi Afoola"
Lammiin si gaafata! Diraamaamoo fiilmii, Akkamiin amanna? – Walaloo
15 Feb 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Nagayaan boqadhu! Ni boqatte jedhu Dhugaadhaa? Abbaa Lataa Amanuu dadhabee Lammiin si gaafata! Diraamaamoo fiilmii Akkamiin amanna? Ciistee hafte jedhu Dhibee si mudate Mee eenyuun gaafanna!? Saba si jaallatuuf Maa Garaa jabaatte? Halkan dukkanumaan Kan deemtee fagaatte! Nama...
[Walaloo Ajaa’iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale
09 Feb 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Naa'ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra'ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba'aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama...